Xarunta McKnight Foundation,
saldhig qoys oo ku saleysan Minnesota, ayaa sii kordhaya kaliya, hal-abuur, iyo badan mustaqbalka halkaas oo dadka iyo meeraha ku koraan.
Waxaan ku talinaynaa adduunka oo aqoonsanaya sharafta qof kasta, adduunka oo aan u dabaaldego hal-abuurka farshaxanka iyo cilmiga sayniska, isla markaana aanu isu nimaadno si aan u ilaalino midkeenna iyo dunida keliya.
Kalsoonida dadwaynaha ee hay'adaha oo dhan waa ay yaraatay, dabeecada runta ayaa su'aasha la galiyay, cadaadiska nidaamkeena bulsheed iyo dabeecadeena ayaa si aad ah u kordhay. Farqiga jinsiyada, oo ka dhashay midab-takoorka hay'adda oo qayb ka ah dhaxalka qarankeena, sii wado maanta.
Xaqiiqooyinkan xaqiiqada ah ayaa na nala soo xiriiraya si aan fiicneyn oo aan fiicneyn. Haa, rajo, sababtoo ah taariikhda ayaa sidoo kale ina tusinaysa awoodda dadka iyo bulshooyinka wadaagaya go'aanka si loo sameeyo isbeddel wanaagsan.
Waxaanu la kulannaa daqiiqaddan rajo iyo geesinimo.
Masuuliyaddeena ugu qoto dheer waa inaanu isticmaalno dhammaan kheyraadkeena si loo yareeyo saameynta shaqada. Waxaanu u fidinaa khayraadka Aasaaska si hufan oo aan u raadinno in aan sare u qaadno tixgelinta, kalsoonida, iyo waxtarka.
Cilaaqaadyada runta ah iyo kuwa wada-xaajoodka ah ayaa si qoto-dheer noogu jira. Waxaan isdhaafineynaa maskaxdeena iyo karti-xirfadeedka dhaqan-dhaqameedka si ay nooga caawiyaan inaan isku xidhno khilaafaadka noocyada kala duwan.
Waxaan kuqornay a habka sinnaanta Dhamaan Hay'adda sababtoo ah waxaan u aragnaa ujeedo muhiim ah. Waxaan u dhigmeynaa siyaasadeena, dhaqannada, iyo khayraadka si ay dadku u helaan fursado dhab ah si ay u horumaraan gudaha iyo caalamka.
Akhriso Qoraalkeena Kala Duwan, Sinnaanta, iyo Ka Qaybgalka.
Waxaan qiimeeynaa barashada joogtada ah, waxaanan eegnaa dibna waxaan u aragnaa gudaha si aan u ogaano fursadaha saameyn weyn. Kaliya markaan qabanno is-hoosaysiinta, waydiiso su'aalo waaweyn, oo waxaan ku dhaqannaa dhegeysi qoto dheer oo aan ku furi karno fikrado iyo xiriiro cusub.
Soo dejiso qaabkayaga guud ee istaraatiijiga ah